Yaa ugu mudda dheer madaxda Xilalka soo qabtay 8-dii sano ee lasoo dhaafay? - Awdinle Online
Dalka Soomaaliya, waxaa isbedel lagu sameeyaa kuraasta sar sare ee qaranka ugu yaraan afartii sano hal jeer.
Waxaana inta badan isbedel ku yimaadaa Madaxweynaha dalka, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Reysul-wasaaraha dalka, Golaha wasiirada, Taliya-yaasha ciidamada iyo goddoomiyaha maxkamadda Sare.
Isbedellada joogtada ah kuma koobna kuraasta sare kaliya, wuxuuna saameyn ku yeeshaa hey,adaha kala duwan ee ah kaabayaasha Dowladda Soomaaliya . Isbedelladaan, waxey horseedaan in uu baaho ka qeyb galka bulshada ee siyaasadda dalka, gaar ahaan dhalin-yarada aqoon yahanka ah.
Sidoo kale, wuxuu muhiim u yahay wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka madaxda sare ee dalka iyo madaxda hey,adaha dowladda.
Isbedelka lagu sameeyo hey,adaha dowladda wuxuu ka hortag u yahay in ey abuurmaan maamullo boqortooyin ah iyo in lagu takri falo awoodda dowladda. Hey,adaha Dowladda oon la bedelin madaxdooda Iyadoo isbedellada xilalku dalka ka yihiin joogto, ayaa waxaa la yaab ah in ay jiraan hey,ado iyo xafiisyo dowladeed oo aan madaxdoodu is bedelin, si lamid ah maamullada Boqortooyada ah ee ka jira qeyba ka mid ah dunida. Hey,adaha muhiimka u ah dowladda Soomaaliya oo noqday Boqortooyin, waxaa ka mid ah Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ( MCQS) oo hal maamul uu soo hayey todobadii sano ( 7) ee lasoo dhaafay.
Waxaa kale oo ka mid ah, Hey,adda Jinsiyadaha iyo Socdaalka Soomaaliya oo aan madaxdeedu is bedelin labada mudda xileed ee Madaxweynihii hore iyo Madaxweynaha hadda xilka haya.
Sababaha aan loo bedelin Hay,adahaan dowladeed Waxaa in muddo ah dood ka jirtay sababta dhabta ah ee aan loo bedelin madaxda iyo maamulka hey,adaha dowladda ee aan kor ku soo xusnay, waxaana ilo xog ogaal ah noo xaqiijiyeen in sababtu tahay kaliya madaxda hey,adahaan oo qeyb ka ahaay Ololihii doorashada ee Madaxweyne Farmaajo 2016 iyo in ey ballan qaadeyn ka shaqeynta guusha Madaxweyne Farmaajo ee doorashada soo socota 2020/2021.
Qore: Bile Nuur Jaamac bile2010@gmail.com
Previous articleAkhriso:- Qodobada looga hadlayo kulanka Maanta ee Golaha Shacabka
Next articleTaliyaha Booliska Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah ka wada Dhuusamareeb